Myanmar Spelling(DMNL) For PC Windows and MAC [Download] - 9thbitgames
How to Install Myanmar Spelling App (DMNL) on Windows PC and MacBook
Download Myanmar Spelling (DMNL) software for PC with the most powerful and reliable Android emulator like NOX APK player or BlueStacks. All Android emulators can be completed to use Myanmar Spelling (DMNL) on Windows 10, 8, 7, computers and Mac.
Myanmar Spelling (DMNL) app available on Play Store. So seek and find it.
Choose the installation option under the Myanmar Spelling (DMNL) logo and enjoy!
Myanmar Spelling FAQ (DMNL) – Features and User Guide
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း ကို အသုံးပြု ထားပါသည်။
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မူလ ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သော စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း ပါ ဝေါဟာရ များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နုတ် ပယ် ခြင်း မပြုဘဲ ပြည်သူလူထု အကြံပြု ပေးပို့သော ဝေါဟာရများ၊ မွေး စား ဝေါဟာရများ၊ မြည် သံ စွဲ ဝေါဟာရများ၊ အ ပြော ဝေါဟာရများ ကို မြန်မာစာ အဖွဲ့ က စိစစ် တည်းဖြတ် ဖြ ည့်စွက် ၍ ဒုတိယအကြိမ် ဖြ ည့်စွက် တည်းဖြတ် ထားသော မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း နှင့် ခွဲ ထား စာအုပ်များကို အသုံးပြု ပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား ဦး စီး ဌာန၊ မြန်မာစာ အဖွဲ့ က ပြုစု တည်းဖြတ် သော မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း နှင့် ခွဲ ထား Application ဖြစ်ပါသည်။
What’s new on the Myanmar Spelling New Version (DMNL)
This application is the property of its developer / inc. We are not an Affiliate Partner of Myanmar Spelling (DMNL). All elements of DMNL (Myanmar Spelling) applications, such as images and trademarks etc. are the property of the respective owner of Myanmar Spelling (DMNL).
In addition, we do not use our server to download DMNL (Myanmar Spelling) applications. The download begins from the authorized Myanmar Spelling App (DMNL) website.